Fampahalalana fampirantiana sy fanofanana
Masinina fanapahana laser laser 2mm
Hery: 1500W Haben'ny latabatra: 1500x3000mm lohan'ny fanapahana: Raytool (autofocus) / WSX (autofocus) Loharano laser: IPG (marika Alemanina) / Raycus (marika China) Fampiharana ： Masinina manerantany fibre Laser manodina no ampiasaina betsaka amin'ny fikirakirana ny vy karbonika, stainless mbola, firaka s ...
Wire Fa Laser Welding Machine
0.8mm ny savaivon'ny tariby, 1.0mm, 1.2mm. 1.6mm Raha ny hatevin'ny fitaovana dia latsaky ny 1mm, ny elanelana misy eo amin'ny faritra roa dia tokony ho latsaky ny 0.15mm Raha toa ny hatevin'ny ravina mihoatra ny 1mm, elanelam-potoana 0,7mm savaivon'ny tariby 1mm, banga 1.2mm, savaivony tariby 1.6mm Satria manify loatra ny fitaovana, raha ny banga lehibe loatra, ny miempo ...
FSCUT2000 rafitra fanapahana Laser Medium Power
FSCUT2000S rafitra fanapahana laser antonony herinaratra dia rafitra fanaraha-maso vahaolana feno misokatra natao ho an'ny indostrialy lamba vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly, miaraka amina endri-javatra mora apetraka sy ahitsy, fampisehoana tsara ary vahaolana feno, io no fanavaozana ny FSCUT2000C. Applic ...
Ny firoboroboan'ny indostrian'ny laser ao Shina amin'ny 2021 dia mampiseho fironana dimy lehibe
Tao anatin'izay taona faramparany, ny tsenan'ny fitaovana laser an'i Sina dia nitazona fironana fitomboana tsy miova. Araka ny vinavinan'ny Institiota Fikarohana momba ny Indostrian'ny varotra ao Shina, ny vinavinan'ny indostrian'ny laser tanindrazako amin'ny taona 2021 dia hampiseho ireto fironana manaraka ireto: politika politika ...
Ny tsy fitoviana eo amin'ny welding WIG sy ny laser welding
Ny toetra mampiavaka ny lasitra laser dia ny fanovana kely sy ny fidirana ambany. Ny mampiavaka ny arc argon dia ny fahaizan'ny maneuverability matanjaka, ny fifehezana ny deformation henjana ary ny fidirana lalina kokoa. Mba hifanaraka amin'ny ampahany manify, salantsalany ary matevina, azonao atao ny misafidy milina maotera arabo argon samihafa ...
Ahoana no hanavahana ny kalitaon'ny milina fanodinana laser tariby sy ny fantsom-by
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-03-22
Amin'ny maha-masinina fanodinana mahomby azy, ny takelaka sy ny fantsom-pandrefesana milina fanapahana laser fibra misy tanjona dia be mpampiasa amin'ny fanodinana sy ny famokarana ny orinasa. Na izany aza, maro ny olona tsy mahalala ny kalitaon'ny vokatra rehefa misafidy ny hampiasa azy izy ireo, ka ahoana no hitsarana azy? Manaraka izany, Cheeron Laser dia ...
Nozera ho an'ny karazana loha fanapahana laser rehetra
Noosy — Amin'ny alàlan'ny varahina avo lenta, ny teboka mitsonika dia mahatratra 1083 ° C, miaraka amina herinaratra sy hafanana be dia be ary plastika tena tsara. Manome fantsom-panafody ho an'ny karazan-doha fanapahana laser rehetra izahay, WSX, Raytool, loha fanapahana Precitec, Quelle sns. Single sosona sy roa sosona nozzl ...
Cheeron laser: Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy miasa
Amin'izao vanim-potoanan'ny lohataona izao dia tonga am-pahanginana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy miasa faha-8 "8 martsa". Eto aho dia te-hanao fiarahabana tratry ny fialantsasatra ho an'ny mpiasa vehivavy rehetra sy ny vehivavy sakaizan'ny Cheeron Laser rehetra! Isaky ny tsipika fandraharahana sy ny toerana asa rehetra an'i Cheeron Lase ...
Cheeron laser dia maniry ny rehetra hanana fiandohana mahafinaritra amin'ny 2021
Andro fahafolo tamin'ny volana volana voalohany niaraka tamin'ny feon'ny afomanga Cheeron Laser dia nanomboka niasa tamin'ny fomba ofisialy Tamin'ny 21 Febroary (andro fahafolo tamin'ny volana volana voalohany), Andriamatoa Zeng Junhe, mpanorina ny Wuxi Qingyuan Laser Technology Co., Ltd., nilaza ny taona vaovao sambatra ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny ...
Famerenana sary an-tsary ny majika amin'ny fitaovana sisa
avy amin'ny admin tamin'ny 21-02-05
Inona ny famerenam-bidy? Inona no mahasoa anao? Inona koa no azonao sary? Inona ny famerenam-bidy? Azonao atao ny mandray phohos ho an'ny fitaovana sisa tavela avy eo manafatra ao anaty rindrambaiko, ary mamantatra ny tena fitaovana sisa tavela amin'ny fakantsary. Amin'ny alàlan'ny rindrambaiko sy fanovana hanapahana. Inona no mahasoa anao? Mamonjy anao ...
Ny vokatry ny hafainganam-pandeha amin'ny fanapahana kalitao
1. Ny vokatry ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha amin'ny kalitaon'ny fanapahana: * Mety hiteraka tsy fahafahany manapaka izany ary mampipoaka ny famafazana; * Misy faritra azo tapaka, fa misy faritra sasany tsy azo tapahina; * Ataovy matevina kokoa ilay faritra fanapahana iray, fa misy tasy mitsonika; * Haingam-pandeha loatra ny hafainganam-pandeha ka mahatonga ny ...
Inona no mahatonga ny fihenan'ny masinina manapaka laser amin'ny fizotran'ny fanapahana?
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia an-trano mitohy, raha orinasa maro no mampiasa milina fanapahana laser fibre amin'ny fikarakarana ny workpiece, tsy vitan'ny hoe afa-mitahiry vola ihany izy ireo, fa manatsara ny fahombiazan'ny famokarana ihany koa, saingy misy antony maro noho ny lesoka amin'ny fizotran'ny fanapahana sy ny valin'ny fanapahana mahantra mandritra .. .